ch9မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch9မဿဲ
9:2 ထိုအခါ, they brought to himaparalytic, lying onabed. ထိုအခါယရှေု, seeing their faith, said to the paralytic, "ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခံ့ခံရ, သား; သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်နေကြတယ်။ "
9:3 ထိုအခါ, some of the scribes said within themselves, “He is blaspheming.”
9:4 And when Jesus had perceived their thoughts, ဟုသူကပြောသည်: “Why do you think such evil in your hearts?
9:5 ပြောရပိုမိုလွယ်ကူအရာ, '' သင်၏အပြစ်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်နေကြတယ်,'သို့မဟုတ်ပြောစရာ, '' ထလော့နှင့်လမ်းလျှောက်?''
9:6 ဒါပေမယ့်, so that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins,” he then said to the paralytic, "ထလော့, သင့်အိပ်ရာကိုတက်ယူ, နှင့်သင်၏အိမ်ထဲသို့သွားပါ။ "
9:8 Then the crowd, ဒီကိုမြင်လျှင်, was frightened, and they glorified God, who gave such power to men.
9:9 ယရှေုသညျထိုအရပ်မှ သွား. အခါ,, သူမြင်ခဲ့တယ်, အခွန်ရုံးထိုင်နေသည်, မဿဲအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်. သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, "ငါ့နောက်သို့လိုက်။ " ထိုအထ, သူသညျလိုကျ.
9:10 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, အိမ်၌ရှိတော်မူစားရန်ဆင်းထိုင်အဖြစ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, မြားစှာသောအခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့ရောက်ရှိ, ထိုသူတို့သညျယရှေုနဲ့သူ့တပည့်နှင့်အတူစားရန်ထိုင်နေ.
9:11 ထိုအခါဖာရိရှဲတို့, ဒီကိုမြင်လျှင်, ပည့်တော်တို့အားမိန့်, "ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ဆရာကိုအခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားပါဘူး?"
9:12 သို့သျောယရှေု, ဒီကြားနာ, ကပြောပါတယ်: "ဒါဟာဆရာဝန်တစ်ဦး၏လိုအပ်ချက်၌နေသောကျန်းမာသန်စွမ်းနေသောသူတို့ကိုမဖြစ်, ဒါပေမဲ့ရောဂါရှိသူတို့.
9:13 သို့ဖြစ်., ထွက်သွားနှင့်ဤဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာလေ့လာသင်ယူ: 'ငါမသနားတျောမူအလိုရှိသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမ။ ' 'ငါပဲဖုန်းခေါ်မလာကြပြီ, ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့။ "
9:14 ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်သူ့ကိုမှချဉ်း ကပ်., ဟုဆို, "ဘာကြောင့်အစာရှောင်မကြာခဏကျွန်တော်တို့နှင့်ဖာရိရှဲပြုပါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့တပည့်အစာမရှောင်ပြုပါ?"
9:15 ထိုအယေရှုက: "ဘယ်လိုသတို့သား၏သားငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုနိုင်, သတို့သားသူတို့နှင့်အတူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်? သတို့သားသူတို့ထံမှသိမ်းယူလိမ့်မည်သည့်အခါသို့သော်လက်ထက်၌ရောက်လာပါလိမ့်မယ်. ပြီးတော့သူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်.
9:16 အဘယ်သူမျှမဟောင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ်သို့အသစ်အထည်တစ် patch ကိုချုပ်မယ်လို့များအတွက်. ဒါကြောင့်သွားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှတန်ဆာခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့များအတွက်, နှင့်မျက်ရည်ပိုမိုဆိုးရွားစေ.
9:17 သူတို့အဟောင်းသားရဘေူး၌အသစ်သောစသောစပျစ်ရည်သွန်းလောင်းလေ့မရှိ. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အသားရဘေူးကှဲထှကျ, နှင့်စပျစ်ရည်ကိုသွန်းလောင်း, နှင့်သားရဘေူးကိုဖျက်ဆီးကြသည်. အဲဒီအစား, သူတို့အသစ်သားရဘေူး၌အသစ်သောစသောစပျစ်ရည်သွန်းလောင်း. ဆိုတော့, နှစ်ဦးစလုံးထိနျးသိမျးနေကြတယ်။ "
9:18 သူကထိုသူတို့အားဤအရာများကိုစကားပြောခဲ့ပါသည်အဖြစ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, တစ်ခြို့သောအကဲအမှူးသူ့ကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် adored, ဟုဆို: "သခင်, ငါ့သမီးမကြာသေးမီကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်. ဒါပေမယ့်လာနှင့်သူမ၏အပေါ်သို့သင့်လက်၌စည်းကြပ်, သူမအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ "
9:19 ထိုအခါယရှေု, မြင့်တက်တက်, သူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်, တပညျ့တျောတို့နှင့်အတူ.
9:20 ထိုအခါ, အမျိုးသမီးတစ်ဦး, တဆယ်နှစ်နှစ်သွေးတစ်စီးဆင်းမှုကနေခံစားခဲ့ရခဲ့သူ, နောက်ကွယ်မှကနေချဉ်းကပ်နှင့်သူ၏အဝတ်ကိုအနားထိမိ.
9:21 သူသည်ကိုယ်အတွင်းကဆိုပါတယ်များအတွက်, "ငါသည်ပင်သူ၏အဝတ်မထိပါလိမ့်မယ် အကယ်., ငါကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ "
9:22 သို့သျောယရှေု, သူမ၏လှည့်နှင့်ကိုမြင်လျှင်, ကပြောပါတယ်: "ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခံ့ခံရ, သမီး; သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း။ ကောင်းစွာသင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ "ထိုမိန်းမသည်ထိုအခြိနျ မှစ. ကောင်းစွာဖန်ဆင်းခဲ့သည်.
9:23 ယရှေုသညျအုပျ၏အိမျ၌ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, သူသည်ဂီတသမားများနှင့်နထောင်လွှားသောလူအစုအဝေးမြင်ဘူး,
9:24 ဟုသူကပြောသည်, "ထွက်ခွာမည်. မိန်းကလေးအဘို့အသေကောင်ကိုမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်အိပ်ပျော်။ "ထိုသူတို့ကသူ့ကိုသရော်နေ.
9:25 ထိုအခါလူအစုအဝေးလွှတ်လိုက်ခဲ့ပြီးမှ, သူဝငျကွ. သူသည်ထိုအလက်ဖြင့်သူ့ကိုသိမ်းပိုက်. ထိုအခါမိန်းကလေးသည်ထ.
9:27 ထိုအယေရှုသည်ထိုအရပ်မှလွန်သွားအဖြစ်, နှစ်ဦးမျက်စိကန်းတို့သညျသူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်, အော်ဟစ်လျက်, "ကျွန်တော်တို့ကိုသနား Take, ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်သည်။ "
9:28 ထိုနောက်မှအိမ်တော်ရောက်ရှိလာသည်ပြီးမှ, မျက်စိကန်းတို့သညျသူ့ကိုချဉ်းကပ်. ထိုအယေရှုက, "သင်ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအမှုကိုတတ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ကိုးစားနေပါနဲ့?"သူတို့ကသူ့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, "စင်စစ်, သခင်ဘုရား။ "
9:29 ထိုအခါထိုသူတို့၏မျက်စိကိုထိမိ, ဟုဆို, "သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအလိုအရ, ဒါကြောင့်သင်အဘို့ပြုကြကုန်အံ့။ "
9:30 နှင့်သူတို့၏မျက်စိကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်. ထိုအခါယရှေုသညျသူတို့ကိုသတိပေးခဲ့သည်, ဟုဆို, "အဘယ်သူမျှမကဤသိကြောင်းမှကြည့်ရှုပါ။ "
9:31 ဒါပေမယ့်အပြင်ထွက်ပြီး, သူတို့သမျှသောပြည်သို့ကြောင့်ထိုသတင်းပြန့်နှံ့.
9:32 ထိုအခါ, သူတို့သည်ထွက်သွားသောအခါ, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သူတို့ကသူ့ကိုစကားအသောသူသည်လူကိုယူဆောင်, နတ်ဆိုးစွဲရှိခြင်း.
9:33 ထိုအခါနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်, အဆိုပါစကားအသောသူသည်စကားပွော. ထိုအခါလူအစုအဝေးအံ့ဩ, ဟုဆို, "ဒီဣသရေလအမျိုး၌အမွငျတှေ့ခဲ့တူသောဘာမှရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှမ။ "
9:34 ဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကဆိုပါတယ်, "နတ်ဆိုးမင်းသားအားဖြင့်သူနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ဘူး။ "
9:35 ယရှေုသညျမြို့နှင့်မြို့လုံးကိုတလျှောက်လုံးခရီးထွက်, တရားစရပ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒ, နှင့်နိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောန, ခပ်သိမ်းသောနာမကျန်းမှုသည်အားနည်းခြင်းအဖြစ်အနာပျောက်စေနိုင်သော.
9:36 ထိုအခါ, လူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လျှင်, သူကသူတို့ကိုသနားစုံမက်ဖူး, သူတို့ခံရသော်လည်းတို့လျောင်းခဲ့ကြသောကြောင့်,, သိုးထိန်းသည်သိုးကဲ့သို့အမပါဘဲ.
9:37 ထိုအခါသူသည်မိမိတပည့်ကပြောပါတယ်: "ဒီစပါးရိတ်ရာကာလအမှန်ပင်သည်ကြီးမြတ်, ဒါပေမယ့်လုပ်သားများအနည်းငယ်ရှိပါတယ်.
9:38 ထို့ကြောင့်, စပါးရိတ်ရာကာလ၏သခင်အယူခံလွှာတင်ရေး, သူသည်မိမိစပါးရိတ်ရာကာလမှလုပ်သားများကိုစေလွှတ်အံ့သောငှါနိုင်အောင်။ "
စက်တင်ဘာလ 21, 2019
စက်တင်ဘာလ 19, 2019